Gridcoin: သိပ္ပံဆိုင်ရာစီမံကိန်းများအတွက်တွက်ချက်ခြင်းအတွက်ဆုချသော Open Source Cryptocurrency | Linux မှ
အိုင်ဗင် | | applications များ, GNU / Linux များ
Cryptocurrency algorithms ဗိုင်းရပ်စ်သွားနေပါတယ်, ဒါပေမယ့်အချိန်ကြာမြင့်စွာသူတို့နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အများကြီးအထောက်အကူပြုခဲ့ကြပြီ။ သေချာပေါက်စာဖတ်သူများအတော်များများသိကြ၏ BOINC Gridcoin သည်အသုံးဝင်သောသိပ္ပံနည်းကျတွက်ချက်မှုများပြုလုပ်ရန်အတွက်သင်သည်ဝါရင့်သမားတစ် ဦး ဖြစ်ပါက seti @ home တောင်မှသို့မဟုတ်ခလုတ်ခုံဖြစ်လိမ့်မည်။ BOINC.
သင်မသိပါက BOINC (ကွန်ရက်တွက်ချက်မှုအတွက် Berkeley Open Infrastructure) သည်အရင်းအမြစ်ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး seti @ home အတွက်တိုးတက်မှုအဖြစ်ဒီဇိုင်းထုတ်သည်။ 90 ၏အကျော်ကြားဆုံးဖန်သားပြင်ဖြစ်သည်။ BOINC သည်တွက်ချက်မှုသက်သက်သာမဟုတ်တော့ပါ SETI, ဒါပေမယ့်အများကြီးပိုပြီးစီမံကိန်းများအတွက်။ ဒီ tool ကို Windows, Android, OS X နှင့် FreeBSD များအတွက် repositories အများစုမှာရနိုင်သည်။
boinc package ကို install လုပ်ခြင်းသည် GUI ကိုလည်းထည့်သွင်းပါလိမ့်မည်။ gui မပါသော version ကိုလိုချင်လျှင် (display မပါသောကွန်ပျူတာများအတွက်) ကျွန်ုပ်တို့သည် boinc-client ကို install လုပ်ရမည် (Archincinux တွင် boinc-nox)
1 Gridcoin ဆိုတာဘာလဲ။
2 ဘယ်လို Gridcoin အလုပ်လုပ်သလဲ?
3 Gridcoin ကိုအသုံးပြု။ ဆုလာဘ်ရဖို့ကိုဘယ်လို?
gridcoin blockchain နည်းပညာကို သုံး၍ အသုံးဝင်သောသိပ္ပံနည်းကျတွက်ချက်မှုများကိုခွင့်ပြုသည့် protocol တစ်ခုဖြစ်သည် BOINC၎င်း၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုသည် Bitcoin ၏လုပ်ငန်းနှင့်ဆင်တူသည်၊ ၎င်းသည်အီလက်ထရောနစ်ငွေအဖြစ်လက်ခံသောသက်တူရွယ်တူ cryptocurrency ဖြစ်သည်။
Gridcoin သည်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည် cryptocurrency သတ္တုတူးဖော်ရေးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများကိုလျှော့ချရန်လည်းအထူးအာရုံစိုက်ထားသည်။ ၎င်းသည်စွမ်းအင်ကိုအကျိုးရှိစွာသုံးစွဲမှုဖြစ်စေသည့်အထောက်အထားခိုင်မာသည့်စနစ်ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။
အတည်ပြုထားသောစီမံကိန်းများအတွက် Gridcoin အသိုင်းအဝိုင်းမှရရှိသောအရင်းအမြစ်ပမာဏသည်အလွန်မြင့်မားသဖြင့်မပြီးဆုံးသေးသောစီမံကိန်းများအတွက်ရရှိနိုင်သောအလုပ်ပမာဏကိုအကြိမ်ကြိမ်ကုန်ဆုံးစေခဲ့သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက LInux သည်စီမံကိန်းအားလုံးကိုလုံးလုံးလွှမ်းမိုးသောလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်သည်။
ဘယ်လို Gridcoin အလုပ်လုပ်သလဲ?
ရပ်ရွာကအတည်ပြု (အီလက်ထရောနစ်အစုစုအတွက်မဲအောက်မှာ) စီမံကိန်းတစ်ခုချင်းစီကိုဖြန့်ဝေဖို့တူညီတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ခံရရှိသည်။
Gridcoin အဖွဲ့ရှိကွန်ပျူတာများ၏တစ် ဦး ချင်းစီ၏မကြာသေးမီကဝယ်ယူခဲ့သောချေးငွေကို (http://boinc.berkeley.edu/wiki/Computation_credit) မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဆုရရှိသူအားလုံး၏ CRA နှင့်အချိုးကျရရှိသည်။
အကျိုးခံစားခွင့်၏ ၁.၅% နှင့်အတူသူတို့ကလုပ်ကွက်တစ်ခုစီတိုင်းကိုဆုလာဘ်များအသုံးပြုသူများကိုဖြန့်ဝေသည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ အဲဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကအရမ်းရှုပ်ထွေးပြီးစျေးကြီးတယ်။အလုပ်ကရိုးရှင်းစေရန်ပြုလျက်ရှိသည်ပေမယ့်) ပူစီနံလုပ်ကွက်များကိုပုံမှန်လုပ်ရန်၊ ဒေါ်လာ ၃၅၀ ဖြစ်သော GRC ၂၀၀၀ လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်အသုံးပြုသူအများစုသည်များစွာသောအရာများကိုရိုးရှင်းစေသည့်ရေကန်တစ်ခုကိုအသုံးပြုကြပြီး၊ အကျိုးကျေးဇူးများကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာရရှိစေပြီး ၀ န်ဆောင်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်အတွက်အလွန်သေးငယ်သောကော်မရှင်တစ်ခုသာဆုံးရှုံးသွားသည်။
Gridcoin ကိုအသုံးပြု။ ဆုလာဘ်ရဖို့ကိုဘယ်လို?
ဤအချိန်တွင်တစ်ခုတည်းသောတက်ကြွသောရေကန်တစ်ခုဖြစ်သည် grcpool.com, အတော်လေးထိရောက်သောဝန်ဆောင်မှုကိုပေးသည်နှင့်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှအလွန်ယုံကြည်စိတ်ချရသောပြသသော, ၎င်း၏အပြုအမူကိုသင်ယူရန်အမြန်လမ်းကိုအောက်ပါဗီဒီယိုသင်ခန်းစာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအားဖြင့်နိုင်ပါတယ်
အကောင့်မန်နေဂျာကိုဖြည့်စွက်ရာတွင် grcpool.com link ကိုထည့်သည်။ ထို့နောက်အထောက်အထားများ။
Grcpool တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် hosts tab သို့သွားသည်၊ မှတ်ပုံတင်ထားသောကွန်ပျူတာသို့သွားပြီးကျွန်ုပ်တို့စိတ်ဝင်စားသောစီမံကိန်းများကိုထည့်သည်။ GPU အတွက်တာဝန်များရှိသောစီမံကိန်းတစ်ခုတွင်သင် cpu ကိုအသုံးပြုခြင်းမပြုကြောင်းသေချာစေရန်ကောင်းသည်။ သုံးစွဲသူများပိုမိုသောစီမံကိန်းများသည်အချိုးအစားနည်းပါးသည်။
အသုံးပြုမည့်စီမံကိန်းများသိမ်းပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် BOINC manager သို့ပြန်သွားပြီး grcpool.com နှင့်ထပ်တူပြုရန်ပေးသည်။ အဲဒီအခြိနျမှာကြှနျုပျတို့တာဝနျမြားစတငျရမညျ။
အီလက်ထရောနစ်ပိုက်ဆံအိတ်မှာ - http://gridcoin.us/
(github တွင်ပြသနာများနှင့်အကြံပြုချက်များကိုဖွင့်ကြည့်ခြင်းသည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းနိုင်သည်။ )
အဓိကအင်္ဂလိပ်စကားပြောအသိုင်းအဝိုင်း: https://steemit.com/trending/gridcoin (စပိန်ဘာသာဖြင့်သံသယများကိုလည်းဖြေဆိုရန်အလွန်ဖြစ်နိုင်သည်။ )
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Gridcoin: သိပ္ပံနည်းကျစီမံကိန်းများအတွက်ကွန်ပျူတာများအတွက်ဆုလာဘ်ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် cryptocurrency
Ramon Hidalgo ဟုသူကပြောသည်
Ummmm …စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
Ramon Hidalgo အားစာပြန်ပါ
လူသား၊ စီမံကိန်းက ၄-၅ နှစ်ရှိပြီ။
bitcoin 20% ကျဆင်းမှု, ငါလျှပ်စစ်မီး, ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်အခြားများ၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုနှိုင်းယှဉ်လျှင်, virtual ငွေကြေးသတ္တုတူးဖော်ရေးအမြတ်အစွန်းမဟုတ်တော့ဘူးထင်ပါတယ် ...
Zentola: bitcoin ပြိုလဲမှု ၂၀% ကျဆင်းသွားတယ်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၊ ဟာ့ဒ်ဝဲနဲ့အခြားအသုံးစရိတ်တွေကိုနှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင် virtual ငွေကြေးသတ္တုတူးဖော်မှုဟာအမြတ်အစွန်းမရတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။
HAYYYY ဒါပေမဲ့ IDIOTAAAAA !!! ဟားဟား
ငါပြောရင်ဒါကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်တုန်းကငါဟာ virtual ငွေကြေးကိုတူးဖော်ရတာကြောင့်ဖြစ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့အိမ်ကွန်ပျူတာတစ်ခုရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကအတော်လေးကျဆင်းသွားတယ်။
GPU အတွက်ဂရပ်ဖစ် SLI သတ္တုတွင်း ၄ ခုရှိခဲ့သည်
တောက်ပတဲ့ပရောဂျက်ဟာသုတေသနလုပ်ခြင်းအားဖြင့်ယခုတစ်နှစ်လုပ်နေပါပြီ။ ၎င်းသည်သုံးစွဲသောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားအတွက်ပေးချေသည်။ ငါဒီစီမံကိန်းကိုယုံကြည်တယ်၊ ပြီးတော့တောက်ပတဲ့အနာဂတ်ရှိတယ်ဆိုတာငါသေချာတယ်။ ရေရှည်တည်တံ့သောနှင့်အကျိုးရှိသော။
John William Johnsen ကိုပြန်သွားပါ